Iwe unogona ikozvino kunyoresa kuyedza Izwi Rinoyerera, Microsoft keyboard | IPhone nhau
Iwe unoda kuyedza inotevera keyboard kubva kuMicrosoft? Sign up kuisa Izwi Kuyerera
Musi waApril 8, yakasvika paApp Store Hub Yekhibhodi, Microsoft yekutanga keyboard yeIOS. Pandakanzwa nhau, ndakakurumidza kuenda kunotora kuti ndinyadziswe kuti iyi keyboard haina kufanana neimwe yandaive ndakamirira kuyedza. Zvino, vhiki imwe gare gare, Microsoft yakavhura peji kwatiri kusaina kukoka kwekuisa Kuyerera kweshoko, iyo keyboard inoita kunge ichave yakakodzera.
Ini ndinoti zvinoita sekunge zvichave zvakakodzera nekuti Hub Yekhibhodi yakasiya yakawanda, yakawanda yekuda. Muchokwadi, ini ndinofunga kuti yapfuura Microsoft chikumbiro ndiyo yakaipisisa keyboard ini yandaedza kubvira Apple ichibvumidza kushandiswa kwechitatu-bato makiyi, ayo isu atinoyeuka aive munaGunyana 2014 nekuvhurwa kweIOS 8. Iyo keyboard haina kunyorova uye iri haisi kuwanikwa muSpanish. Izvo zvakati, yakaipisisa keyboard yandati ndamboedza.
Saina uye edza Izwi Rinoyerera
Iye zvino Microsoft ine mukana wekuzvidzikinura neIzwi Kuyerera. Sezvauri kuona mumifananidzo, iyo nyowani keyboard yekambani inotungamirwa naSatya Nadella ichave imwe yeaya mabhatani atinogona tsvedza pamusoro petsamba kuitira kuti anzwisise izwi ratinoda kunyora uye, zvinoita sezviri kunakidza, inogona kukombama kuitira kuti tikwanise kuwana mavara ese neruoko rumwe, chimwe chinhu chinogona kuuya zvakanyanya pa5.5-inch iPhones.
Iyo yekunyoresa peji rewebhu rinotarisira kuunganidza maemail kubva kune vanhu vanoda kuyedza inotevera khibhodi mune yakavharwa beta kuivandudza iyo kuvhurwa kwayo kuruzhinji. Ndakanyoresa nekuti ndinoona zvichinakidza. Pamamwe mabhatibhodhi andakaedza, hapana anosvika padhuze neiyo yepamutemo kirabhu mufananidzo, tisingataure hunyoro uye kushushikana kana uchichinja pakati peEmoji nekutaipa keyboard. Kana Apple ikagadzira keyboard iyo yaibvumidza kutsvedza pamusoro pemavara ini ndaisazofunga kuyedza mamwe makhibhodi, kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti iro curve yeIzwi Rinoyerera rakandishamisa.
Kana iwe uchida kuyedza, iwe unogona kunyoresa kubva IZVI ZVINONZI, uko kune zvakare vhidhiyo inoratidza mashandiro eShoko Rinoyerera paIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iwe unoda kuyedza inotevera keyboard kubva kuMicrosoft? Sign up kuisa Izwi Kuyerera
Vanomhan'arira Apple kwemamiriyoni maviri emadhora ekuba pfungwa yeApple Watch
Iyo App Store ichaunza shanduko yekuvandudza kutsvaga